ဂျပန်စက္ကူခေါက်ခြင်း / စက္ကူခေါက် | Experience Japan
› ဘလော့ Myanmar › ဂျပန်စက္ကူခေါက်ခြင်း / စက္ကူခေါက်
ဂျပန်စက္ကူခေါက်ခြင်း / စက္ကူခေါက်
စက္ကူခေါက်ခြင်းအရှိဆုံးဂျပန်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုလှုပ်ရှားမှုများအားလုံး၏လူသိများတဲ့ဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤစာတမ်းသည်တိရစ္ဆာန်များ, ပန်းပွင့်သို့မဟုတ်လူတွေအပါအဝင်အကွာအဝေးပုံစံမျိုးစုံကိုဖန်တီးရန်ခေါက်သည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးကအနုပညာအဖြစ်ကျင့်သုံးနေပါတယ်။
(သင်အသစ်အလျှင်နှင့်မင်း) 1 သင်၏အစက္ကူခေါက်ခြင်းစက္ကူစုဝေးစေ။ သာမန်စက္ကူကောင်းပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကတစ်စတုရန်းများ၏အသွင်သဏ္ဌာန်၌တည်ရှိ၏သေချာအောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နှစ်ထပ်ကိန်းအဆိုပါပိုကြီး, အလွယ်ကူခေါက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သငျသညျအမြားဆုံးယာဉ်စတိုးဆိုင်များတွင်စက္ကူခေါက်ခြင်းစက္ကူရှာတှေ့နိုငျနှငျ့သငျကပိုမိုပါးလွှာပြီးပိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ပါတယ်လိမ့်မယ်။ တနည်းအားဖြင့်သင်မကြာခဏအွန်လိုင်းကိုပိုပြီးအစဉ်အလာအလှဆင်စက္ကူရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
2. သင်ခေါက်ရန်ဆန္ဒရှိသောစက္ကူခေါက်ခြင်းဒီဇိုင်းအဘို့အဆင်သင့်ညွှန်ကြားချက်ပါ။ ဒီလို http://www.origami-instructions.com/ အဖြစ်အွန်လိုင်းနမူနာထုတ်စစ်ဆေးလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားခြေလှမ်းများတစ်စက္ကူခေါက်ခြင်းပန်ကာခေါက်ဖို့ဘယ်လိုဖျောပွသွားနေကြသည်။
3. အထက်သို့ခေါက်အဆိုပါစက္ကူဖြူအခြမ်းနှင့်အတူစတင်ပါ။ (သင်စက္ကူတစ်ရောင်စုံအပိုင်းအစရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်, သင်ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းနှင့်ထို့နောက်ညွှန်ကြားချက်နှင့်အတူဆက်လက်နိုင်ပါတယ်။ ) အကျယ်အတွက်အောက်ခြေတဦးတည်းစင်တီမီတာတစ်လျှောက်ခေါက်။ သင်တစ်ဦးကိုအစိုးရသောမင်းရှိပါကသင်နှိပ်အနားတလျှောက်တွင်အစိုးရသောမင်းအပြေးနေဖြင့်ခက်ခဲနှိပ်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါရောင်စုံစာမျက်နှာယခုပြသနိုင်အောင် 4. စက္ကူကျော် Flip ။ အသစ်ရဲ့ခတ်ဆက်ရေးမထားပါနဲ့။
5. နောက်တဖန်အကျယ်အတွက်အောက်ခြေတဦးတည်းစင်တီမီတာတစ်လျှောက်ခေါက်။ သင့်ရဲ့အစောပိုင်းခွံသင်အတိုင်းလိုက်နာရန်အဘို့အလမ်းညွှန်ဖန်တီးပေးလိမ့်မည်ကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မည်။ သင်တစ်ဦးကိုအစိုးရသောမင်းရှိပါကသင်သည်နောက်တဖန်အနားနှိပ်နိုင်ပါတယ်။
အဖြူရောင်အခြမ်းကိုပြသတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် 6. ထပ်စက္ကူကျော် Flip ။ နောက်တဖန်အခြားလိုင်းခေါက်။
အဆိုပါအလှဆင်နိမိတ်လက္ခဏာကိုပြသသည်အထိ 7. ကိုကျော် Flip ။ အခြားလိုင်းခေါက်။ အားလုံးတစ်ခုလုံးကိုစာမျက်နှာတစ်ခုကချွတ်သို့ခေါက်နေသည်သို့မရောက်မှီတိုင်အောင်, ဤအဆင့်တွေကိုထပ်ခါထပ်ခါထားပါ။
ဘေးထွက်ကနေတစျခုစင်တီမီတာအမှတ်အသားခန့် 8. အသစ်တစ်ခုခွံပါစေ။ သငျသညျလိုလျှင်အစိုးရသောမင်းကိုအသုံးပွုဖို့သတိရပါ။ သငျသညျကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူဤလုပ်နေပါတယ်ဆိုရင်သူတို့ stapled မြှားဖို့အနီးကပ်ဆုံးအဆုံးကြိုက်တယ်။
သင့်ရဲ့ပန်ကာနေသူများကဖန်တီးသောကြောင့် 9. တစ်ဦးချင်းစီအခြမ်းကိုဖွင့်!
1. စက္ကူခေါက်ခြင်းစတိုင်များနှင့်နည်းစနစ်ကိုချဲ့ထွင်ရန်ဆက်လက်။ မကြာသေးမီကလူကြိုက်များဖြစ်လာကြပြီခက်နည်းစနစ်ပိုမိုစတိုင်များရှုပ်ထွေးစက္ကူခေါက်ခြင်း, သင်္ချာစက္ကူခေါက်ခြင်း, modular စက္ကူခေါက်ခြင်း, စိုစွတ်ခေါက်စက္ကူခေါက်ခြင်းနှင့်စက္ကူခေါက်ခြင်း tessellations ပါဝင်သည်။
စက္ကူခေါက်ခြင်း၏ 2. ယနေ့မကျြနှာကို Yoshizawa Akira ဖြစ်ပါတယ်။ သူကစက္ကူခေါက်ခြင်း၏အသိအမှတ်ပြုထားသော်လည်း grandmaster နှင့်ခေတ်သစ်ဖန်တီးမှုစက္ကူခေါက်ခြင်း၏အဘဖြစ်၏။ သူကအတူတူဂျီသြမေတြီနှင့်အနုပညာ fusing များအတွက်လူသိများသည်။ Yoshizawa Self-ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တဲ့သူကလေးတစ်ဦးအခါမိန်းကလေးတစ်ဦးကသူ့ကိုစက္ကူလှေကိုပေး၏သည့်အခါစက္ကူခေါက်ခြင်းစိတ်ဝင်စားဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဂျပန်တွင် 3. ဆာမူရိုင်း noshi အဖြစ်လူသိများတစ်ဦးချင်းစီကတခြားစက္ကူခေါက်ခြင်းလက်ဆောင်တွေပေးခဲ့တယ်လိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကား, စက္ကူအပိုင်းအစတွေထဲကနေငါး၏အသွင်သဏ္ဌာန်ကိုယူအကြိမ်ပေါင်းများစွာခေါက်နှင့်တစ်ဦးကံကောင်းပါစေလက္ခဏာသက်သေစဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
4. သငျသညျတစျထောငျစက္ကူကြိုးကြာခေါက်လျှင်, သင်ကဆန္ဒခွင့်ပြုနိုင်မယ့်ဂျပန်မယားတို့ကိုပုံပြင်ရှိပါသည်။ သူမနေမကောင်းကျဆင်းသွားပြီးနောက်ဒီလိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့သူကို Sadako ဟုခေါ်တွင်မိန်းကလေးတစ်ဦး၏လှပသောပုံပြင်ရှိပါသည်။ သငျသညျ Sadako ရဲ့ပုံပြင်ကိုဖတ်လိုပါက Sadako နှင့်တစ်ထောင်စက္ကူ crane Elenor Coerr ကစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
5. အကြီးဆုံးစက္ကူခေါက်ခြင်းရိန်းနီးပါး 82 မီတာသို့မဟုတ် 268 ပေ 10 လက်မတစ်ရှည်ရှိခဲ့ပါတယ်။ နည်းနည်းစက္ကူခေါက်ခြင်းစာမျက်နှာများကိုအများကြီးမီတာ 100 အားဖြင့်မီတာ 100 ကိုတိုင်းတာကြောင်းစာရွက်တစ်ခုတည်းအပိုင်းအစစေရန်အတူတကွလျှက်ရှိကြောင်းခဲ့ကြသည်။ ဤမှတ်တမ်းသည်ဟီရိုရှီးမား, ဂျပန်အတွက်ဟီရိုရှီးမား Shudo တက္ကသိုလ်မှငြိမ်းချမ်းရေး Piece စီမံကိန်းအားဖြင့်ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။
အကြီးမားဆုံး မှစ. အသေးဆုံးမှ 6. ! အသေးဆုံးစက္ကူခေါက်ခြင်းရိန်း 1 မီလီမီတာ 1 မီလီမီတာ၏ရှုထောင့်ခဲ့ကြောင်းစာရွက်ထဲကကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ လက်ထောက်ပါမောက္ခက Watanabe အဆိုပါရိန်းစေနိုင်ရန်အတွက်အဏုနှင့်အပ်ချုပ်အပ်သုံးစွဲဖို့လိုအပ်! သူ Nigata တက္ကသိုလ်, ဂျပန်မှာဒီစံချိန်ကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
7. အဆိုပါအရှည်ဆုံးပန်းကုံး 7000 မီတာမှာစက္ကူခေါက်ခြင်းအစီအမံထဲကလုပ်! ဒါက 4.3 မိုင်ပဲ! ဒါဟာဂျပန်နိုင်ငံအတွက်ဟီရိုရှီးမားအထူးပံ့ပိုးမှုကျောင်းအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။
8. အတိအကျစက္ကူခေါက်ခြင်းမဟုတ်ပေမယ့်, ဂျပန်ကနေအခြားယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစက္ကူယာဉ် kirigami ဟုခေါ်သည်။ စက္ကူခေါက်ခြင်းသာခေါက်နေဖြင့်ယင်း၏ပုံစံမျိုးစုံစေသည်နေစဉ်, kirigami အဖြစ်ကောင်းစွာဖြတ်တောက်ပါဝငျသညျ။ အနုတ်လက္ခဏာအာကာသနှင့်အတူပိုမိုရှုပ်ထွေးပုံစံမျိုးစုံနဲ့အနုပညာကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအနုပညာကိုအပိုင်းပိုင်းစက္ကူခေါက်ခြင်းထက်ပိုနူးညံ့သိမ်မွေ့သောဖြစ်ကြပြီးကျိန်းသေကြည့်ရကျိုးနပ်ဖြစ်ကြသည်။
9. စက္ကူခေါက်ခြင်းအနုပညာပုံစံပေါ်တွင်တစ်ဦးသည်ခေတ်သစ်လှည့်ဖျားစက္ကူခေါက်ခြင်းပေါ့ပ်အပ်ဒီဇိုင်းများနှင့်အတူပေါ်ထွန်းတော်မူ၏။ ဒါဟာ 1980 ခုနှစ်ရဲ့ Masahiro Chatani အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး, သူသည်နှင့်ကကေို Nakazawa အသစ်အနုပညာပုံစံအတွက်ထက်မြက်နှင့်အလှအပပြအများအပြားစာအုပ်တွေရှိခဲ့ပါသည်။
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စက္ကူခေါက်ခြင်းခရီးကိုဆက်လက်ရန်ဆန္ဒရှိလျှင် 10 A ကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းသယံဇာတ http://www.origami-instructions.com/ မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်စက္ကူခေါက်ခြင်းစေရန်လိုအပ်သည့်အဆင့်များနှင့်နည်းပညာများကိုကူညီအွန်လိုင်းလဲ tutorial နှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများဆက်တိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဖြစ်ကောင်းစွာသင်ကူညီပေးဖို့ Youtube ကိုဗီဒီယိုများထောင်ပေါင်းများစွာ၏လည်းရှိပါတယ်။